Madaxweyne Waare oo kulamo xal raadin ah ka bilaabey Buulo Burde - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Madaxweyne Waare oo kulamo xal raadin ah ka bilaabey Buulo Burde
Madaxweyne Waare oo kulamo xal raadin ah ka bilaabey Buulo Burde
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xalay ku hoyday degmada Buulo Burde ee Gobolkaasi Hiiraan ayaa halkaasi waxaa uu ka bilaabey kulamo xal looga raadinayo khilaaf Mamaul oo halkaasi ka jira.
Waare ayaa xalay la kulmay qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka degmada Buulo urde,kuwaas oo kasoo horjeeday Maamul Cusub oo degmadaasi ay u Magacaawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle.
Kulanka ayaa waxa diirada lagu saarey sidii xal looga gaari lahaa khilaafkaas,isla markaana Odayaasha & xgaradka degmada Buulo urde ay u aqbali lahaayeen Maamulka Cusub lana Shaqeeyaan.
Dad ku dhow dhow kulanka ayaa waxaa ay Risaala u sheegeen in inta badan Odayaasha Dhaqanka iyo wafdiga Madaxweyne Waare oo uu qeyb ka yahay Wasiirka Arrimaha gudaha Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle ay isku soo dhawaadeen,isla markaana ay jiri doonaan kualmo kale.
Odayaasha & waxgaradka degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiraan ayaa gebi ahaanba diidey inay degmadaasi ka Shaqeeyaan Maamulka Cusub oo loo Magacaabey si howlaha ay Bulshada u baahan yihiin loogu qabto taas oo keentay in Madaxweyne waare iyo Xubno ka tirsan maamulkiisa ay tagaan degmadaas.
Sidoo kale waxaa horey degmada Buulo Burde uga dhacay banaanbax sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah,kaas oo looga soo horjeeday safar uu halkaasi ku tegayay Wasiirka Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle .
Previous articleQarax ka dhacay Gaalkacyo iyo howlgal ka socda
Next articleStatement Of The Federal Goverment Of Somalia on Manda Bay
Dowladda oo Qalab looga hortago COVID 19 ku wareejisey laba Maamul...
Wasaaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta u sii dhiibtay Maamul Goboleedada Galmudug iyo Hirshabeelle qalab loogu talo galay ka hortaga...